MESA: ikozvino inobvumira OpenGL uye Vulkan maapplication kuti "ataure" kune mumwe nemumwe | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Graphics, Multimedia
Kunyangwe iyi nhau isingaenderane zvakanyanya nemitambo yemavhidhiyo, inonakidza kwazvo kune iyo Linux giraidhi stack. Uye ikozvino izvo zvichatibvumidza isu kuti tiite zvinhu zvitsva zvaisagona kuitwa kare, uye zvese nekutenda kubasa raCollabora rakaitwa pa Mesa vatongi, pamwe nevamwe vakaita seIgalia uye nenhengo dzese dzemunharaunda dzinoenderera nekuunza kunatsiridzwa kwekodhi.
Iye zvino, zvinoshandiswa zvinoshandisa graphical API OpenGL uye Vulkan vachakwanisa kutaurirana. Ichokwadi kuti Vulkan ndiyo ramangwana muchikamu chemifananidzo, uye kuti zvishoma nezvishoma ichatsiva OpenGL nekuda kwekunakira nekuita kwayo. Nekudaro, kuchine kwakawanda kutsamira paOverGL nesoftware uye injini dzemitambo. Vese vekare uye vamwe vemazuvano vanoramba vachisarudza OpenGL nezvikonzero zvakasiyana.
Zvakare, kana zvasvika pamitambo yakakura kwazvo yemavhidhiyo, kuchinja kubva kune imwe API kuenda pane imwe Icho hachisi chinhu chiri nyore uye chinowanzo kutora nguva. Mamwe mapurojekiti anogona zvishoma nezvishoma kusanganisa Vulkan uye chengeta zvimwe zvikamu neOpenGL. Ichi chikonzero nei nhau idzi dzakakosha zvakanyanya mune ramangwana richangopfuura.
Zvese izvi, pamwe ne iko kuvandudza kunoshamisa izvo zvinoonekwa pamwe neshanduro nyowani yeMESA, ichavandudza nyika yakajeka muLinux, zvakare inokanganisa mitambo. Zvichida kubva pakuona kwemushandisi wekupedzisira hachisi chinhu chinoonekwa zvakanyanya, asi zvichaita kuti hupenyu huve nyore kune vanogadzira, vanozove nemikana yakawanda kubva zvino zvichienda mberi kune avo mitambo yeHybridGL-Vulkan.
Muchidimbu, nekuda kweizvi kuwedzera kutsva Nemutoro wakaderera weMESA, maapplication anozokwanisa kutaurirana pasina kukanganisa kuita. Kune rimwe divi, iyo zvakare inopa yakawanda kuchinjika uye inoderedza iyo nguva yakashandiswa munzira yemugwagwa yekuchinja pakati peimwe Khronos graphical API neimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » MESA: ikozvino inobvumira OpenGL uye Vulkan maapplication kuti "ataure" kune mumwe nemumwe
Iyo Linux graphical stack inofanirwa kuve iri chinhu chakaomesesa pasi rese.
Mangani mazinga / zvidimbu zviripo pakati pegirafu cores, kuenda kuburikidza neiyo firmware, buffers, matafura, waini, X / Wayland, windows maneja, vanyori, mitambo, vhidhiyo vanobata kana 3d mashandisiro.